Skype kuthelekiswa ixesha Face
Isilimela 11, 2020 yi Facetime Guide Shiya Comment
Unxibelelwano olusebenzayo sibalulekile ukubaluleka kwihlabathi lanamhlanje. Mhlawumbi ufuna ukuthetha abahlobo kunye nosapho okanye ufuna ukuba onxulumene abaqeshwa ishishini lakho, udinga isixhobo ofezekileyo ezinokukunceda ukuba ukuzalisekisa iimfuno zakho.
Mandulo, abantu babesebenzisa ukwenza mail ukuqhagamshelana nabanye, kodwa ngoku abantu bakhetha ukwenza nezevidiyo ngokusebenzisa yevidiyo kumaqonga. Kunxibelelwano olusebenzayo, Iinkampani ezininzi ziye zenza zeefoni zabo apps yokuzonwabisa ezikuvumela ukufaka iminxeba ukusuka naphi na ehlabathini lonke.
Phakathi yonke le software interactive, apps ezimbini zisoloko wayiqonda ingqalelo yehlabathi. Ezi apps ezimbini usukuzwano ukuba wayehlonelwa Face Ixesha and Skype.
Okubangel 'umdla kukuba, zombini apps (Face Time and Skype) zenzelwe injongo efanayo ukuba abasemagunyeni abasebenzisi zabo ukuba esebenzayo ekuhlaleni, wenze umsindo okanye wevidiyo, ukwenza imiyalezo, ukwenza iqela wevidiyo kwakunye nokunye okuninzi.
Unga lula ukusebenzisa ezi apps kwizixhobo ezahlukeneyo kuquka Smartphones zakho, tablets, desktop, windows, watch intetho, iPod eninzi kakhulu.
Ezi yevidiyo apps iye astoundingly lula kubo bonke abasebenzisi ukuba enxulumene omnye kwimizuzwana nokuba kummandla, kude okanye ixesha. ngongoma zenze ukuba kube lula ukuba unandiphe iiholide zakho okanye ugxininise uhambo lwakho ishishini ngokuhlala ezinxulumene kunye nosapho lwakho, abasebenzi okanye abathengi. Zombini apps abaphathwayo kakhulu, umthengi zobuhlobo ukulawuleka.
Yima nzu, kukho iimpawu ezikhethekileyo apho ezohlula ezi apps omnye komnye. Kweli nqaku, uya kufumana iinkcukacha ingcamango yokuba iimpawu zokhuphiswano, izinga wokuhambelana, ukuhlanganiswa, kunye nomgangatho zombini Skype and Face Time. Eli nqaku liza akuvumela isigqibo iisuti software ngokugcina ngokweemfuno zakho.
0.2 Zokungahambisani Skype:
1 Iimpawu ze Skype
1.1 Ukuhlanganisa Skype
1.4 Zokungahambisani Face Time:
2 Iimpawu Face Time:
2.1 Ukuhlanganisa Face Time:
2.2 Umgangatho Feature of Face Time:
Enye neenkomfa apps kakhulu kwaye eyona inzima vidiyo Skype. Le app waqale lisungulwe 2003 yaye emva kweminyaka embalwa ku 2011 Microsoft Inkampani uthenge ngayo. Microsoft wenza lo anganiphatha $8.5 billion. Lo mbono esisiseko yale software kukuvumela abasebenzisi bayo ukuba aqhube ividiyo engenasiphelo neefowuni audio.
Ukongeza kule, Skype inika inkonzo kubathengi zayo imiyalezo kunye imvakalelo umdla nezitikha ezininzi. Skype ebesoloko swi ukuzalisekisa iimfuno zabathengi wayo. Ngenxa iziphumo zayo japan kakuhle ezihlobene, Skype lifumanise uloyiso enkulu.
Ekubeni njengengcaciso eliphezulu umsindo wevidiyo, Skype iye utsale uninzi isabelo iminxeba ngamazwe. Nazo zonke ezi nkonzo emangalisayo, Skype ikwazile ngempumelelo ukwenza igama layo ityala enkundleni ezahlukeneyo kunye bulletin.
Enye yezinto ezilungileyo kakhulu Skype yi, le app usebenza izixhobo ezininzi. Akuyomfuneko ukuba ahlale kuphela xa usebenzisa le vidiyo neenkomfa app. Ekunika kunye neenkonzo Skype lubandakanye yonke izixhobo kubandakanywa mobile phones, windows, computer, tablets, kunye nezinye izixhobo platform umdlalo.
Ngenxa kwiinkonzo zayo kanye ukuhambelana, Skype uye abathengi emininzi Sony, Isikhululo sokudlala, Smartphones, windows, OS X, Android, BlackBerry, Symbian, Samsung Smart TV, etc.
Iimpawu ze Skype
ekuqaleni, Skype yenzelwe ukunika odiyo iminxeba ukhetho kubaxumi bayo. Kodwa emva kokuba imfuno ephakamileyo ukutshintsha iindlela zonxibelelwano, Kamva yaqalisa uhambisa imiyalezo kunye nevidiyo yethutyana iminxeba kwihlabathi.
Ngokungafaniyo Face Time, Skype ayenzelwanga ukunikela ividiyo online kuphela okanye iminxeba audio. It ikuvumela ukuba ukubiza umntu phezu ndlini okanye iinombolo zomnxeba. Olu phawu kuluncedo ngokwenene ukufikelela bonke abantu apho uqhagamshelo intanethi ulihlwempu okanye ngokucotha.
Kuba video online okanye iminxeba audio, Skype wenza ophethe nantoni na. Kodwa ukuba ufuna ukubiza inani ngamazwe, inombolo yefowuni ephathwayo okanye yasendlini, ngoko ke kufuneka ukuba uhlawule imali yokubhalisa. Skype inika izicwangciso enomtsalane ukuba ubhalisele kwiifowuni intanethi.
I iyahluka irhafu kuxhomekeke kwingingqi yakho lwemali. Sinako cinga Skype njengenye ye ndlini kodwa, olu hlelo enze indawo yayo. Esinye isizathu emikhulu awukwazi ukwenza umnxeba wexeshsa likaxakeka nge Skype.
Ukuze wenze Skype, ungasebenzisa noba Wi-Fi uqhagamshelo intanethi okanye data yakho yenethiwekhi yeselula. Ukuze uqale ukusebenzisa Skype, kufuneka ube Microsoft id yakho email okanye Skype ID. Xa uya ungene kwi-akhawunti yakho Skype, uya kufumana uludwe lwabaqhagamshelwa esele hinkwayo yi le software.
Kufuneka nje nqakraza kwi umsebenzisi ofuna ukubiza. Unakho ukukhangela nayiphi na abafowunelwa abafunekayo ngokubhala igama lakhe okanye kwi bar yokukhangela. Unako ukwenza uluhlu lwe lwakho ezininzi ezisetyenziswayo ngokongeza kubo kokuthandayo.
Ngexesha yakho yevidiyo, Skype inikeza iindlela ezininzi kuquka ongathethiyo ubizo, shintsha camera, izwi-kuphela kwaye ukuvala ucingo. Skype nabo ukunikezela ngeenkonzo zemiyalezo interactive kakhulu kubasebenzisi bayo.
zangasese, Skype ikuvumela ukuba ukuvala okanye ukucima contact. Ukongeza kule, kwakhona evumela ukuba ngoyaba isicelo isigidimi na ukusetyenziswa ukuba awazi kuye.
Kuphakathi kokuba ungumsebenzisi OS X okanye umsebenzisi iOS; ungafikelela yakho iincwadi idilesi kunye nabafowunelwa ngokusebenzisa Skype. Skype phambili iminxeba naliphi na inani ofuna. Unga lokuzuza le nkonzo ngokuthenga Skype credit. Skype kwizivumelwano iqonga ividiyo inkomfa evumela abasebenzisi bezixhobo ezahlukeneyo ukuba eziqhagamshelene ngokusebenzisa software eyodwa.
Ngelishwa, Skype linganiki umgangatho ezilungileyo umsindo wevidiyo. Ngamaxesha athile, noba usebenzisa-high speed intanethi, ungakwazi ukumelana unesisombululo esisezantsi kwaye shuttering wevidiyo.
Le miba nokuba nzima ngakumbi xa uzama ukusebenzisa Skype-veki. Isizathu yangempela, Skype linika iinkonzo zayo zonke izixhobo yaye ngenxa esingenakubalwa labasebenzisi, abantu ukwimeko esemgangathweni. Into entle iqela ka-Skype isebenzela ukusombulula le ngxaki ukuze abaxhasi yanelisekile.
Face Ixesha yenye software abadumileyo ukuba usoloko abasebenzisi bayo onwabile yaye anelisekile. Le software vidiyo zeefoni yasekwa ngu Apple ngo 2011. Le software yaye ngokukodwa ukwenza lula kubasebenzisi isixhobo Apple kubandakanya iPads, iPhones, iPod, kwaye Mac ukuba bahlale eqhagamshelana baze ividiyo and audio iindibano.
Face Ixesha unandipha inani elikhulu zabaxumi yanelisekile. Ngokutsho kwisaveyi, engaphezulu kwe 70 million OS X abasebenzisi kunye iOS abasebenzisi ukuthatha uncedo Face Ixesha ukuthetha kwabanye abasebenzisi.
Zokungahambisani Face Time:
Uyakwazi ukusebenzisa kuphela oku software kwizixhobo Apple. Kufuneka ube Mac okanye iOS isixhobo kunye iikhamera phambili nazo ukuqala umnxeba yakho yevidiyo nge Face Time. Face Ixesha ukuhambisana ngokupheleleyo kwaye zifikeleleka kuphela Apple. Nawe ungaqala ukusebenzisa Face Ixesha ukuba unayo nayiphi na ezi zinto zilandelayo
iPad 2 okanye kamva,
iPhone 4 okanye kamva
4Isizukulwana th iPod okanye kamva
Mac OS X 10.6.6 yaye kamva
Kwimeko izixhobo zakho abanawo camera ku-eyakhelwe, ke kufuneka uqhoboshele yangaphandle web ikhamera ukuqala uqhuba wevidiyo.
Iimpawu Face Time:
ekuqaleni, Face Ixesha ivumela abaxumi yayo becelwa ukuba iinkonzo zayo ngokusebenzisa womnatha WiFi kuphela. Kodwa phambili kunye ngendaleko kobuchwepheshe, kokuba eye wavumela iinkonzo zayo ukuqhuba le app ngokusebenzisa data eselula ngokunjalo.
Enye inzuzo lokhuphiswano Face ixesha, ngokungafaniyo Skype akunyanzelekanga ukuba iphumele inkqubo yokulawula akhawunti yakho. Xa uqala ukusebenzisa Face Time, ihlanganise kwaye ngexesha elinye yonke idatha efunekayo iincwadi idilesi kunye nabafowunelwa for iOS and OS X abasebenzisi ngokuzenzekelayo.
Face Ixesha Kulula kakhulu ukuba ukusebenzisa. Xa ucofa ucinezela iqhosha ukubeka ucingo lwakho, ukwazi ukujonga iinketho ezahlukeneyo eziluncedo kubandakanywa utshintsho camera, Thulisa umbhobho okanye ucime umnxeba wakho. Apple linganiki iinkonzo zayo abathengi VOIP ukuba Skype ukwenza.
Ukuhlanganisa Face Time:
Apple uye emphethweni lokuhlanganisa zombini software ophezulu komsebenzi kunye hardware for iinkonzo yokuzonwabisa zeefoni. Face Ixesha yenzelwe ukunika iziphumo kunye A-oluthi "inkqubo kwiqhezu" kunye nekhamera كاملة |. Ukubonelela iziphumo kakhulu ividiyo kunye ubiza audio, Face Ixesha awusebenzi naluphi uxhulumaniso eliphantsi bandwidth.
Apple ebesoloko belwela nzima ukuze umgangatho premium apps emangalisayo ezijolise japan-kubathengi bayo. Face Ixesha ikwayilelwe ne-bulumko efanayo of Apple, awukwazi ukufumana iimpazamo amahlwempu ividiyo nezwi ilahla kunxibelelwano yakho. Face Ixesha ilungiselelwe ngokuvisisana eziphilayo zomhlaba of Apple.
Umgangatho Feature of Face Time:
Apple ebesoloko wagxininisa kwi umgangatho nokugqwesa ngokweenkonzo ethi abanikela. Esi sesona sizathu ngenxa apho Face Ixesha na umgangatho ngaphezu Skype yayo Idols. Face Ixesha inika iinkonzo yokuzonwabisa zeefoni ezikumgangatho ophezulu asekwe kwimigangatho yamazwe ngamazwe.
Kuba ividiyo kunye ubiza audio, Face Ixesha inikeza kakuhle echazwe, ungaphazanyiswa, izandi ecacileyo umfanekiso odlamkileyo kunye eshukumayo kakuhle.
Le app ezimangalisayo Face Ixesha evumela ukuba wenze iinkumbulo zethu ezintle, ukuhlala ezidityanisiweyo kunye ukudlulisa imiyalezo.
Unxibelelwano rhoqo kwaye esemgangathweni nako kubalulekile xa unayo into ebaluleke kakhulu ukuze adlulisele, okanye ufuna ukunika intetho yakho okanye ufuna ukubonisa umxhasi wakho netywina yakho yentengiso kwaye uluhlu uyaqhubeka.
Face Time and Skype, zombini ezi apps eningenakukholwa lokuqhuba yevidiyo okanye audio iminxeba. Ukuba ungumsebenzisi yesixhobo Apple kwaye ufuna ukubona umgangatho mhle ke kufuneka usebenzise Face Time.
ephambene, ukuba ufuna ukuba ihlanganiswe kunye nabantu abangaphandle kwihlabathi lezixhobo Apple ngoko Skype kulukhetho ilungileyo esichazayo for you.
Uyisebenzisa kanjani i-Skype kwisixhobo se-Android